My Thoughts My Blog: January 2009
အချိန်က ညီအစ်ကို မသိတသိ ကိုလွန်၍ အမေ နဲ့ သမီး ကွဲကွဲပြားပြားပင် မမြင်ရတော့ သော အချိန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ၄ ပေမီးချောင်း တစ်ချောင်း၏ မီးရောင်သည် နေရာကွက်ကွက် ကလေးပေါ်သို့ ယှက်ဖြာ ကျဆင်းနေသောကြောင့် ၀န်းကျင်လေးကို အနည်းငယ်မြင်နေရသည်။ လူမနေသည်မှာ လအတော်အတန် ကြာနေပြီဖြစ်သော အိမ်တစ်လုံး ၏ အနီးသို့ ထိုမီးရောင်လေး ကို အားပြုပြီး လူငယ် နှစ်ဦး ချဉ်းကပ်လာနေသည်။ သူတို့ ၂ ဦးတွင် ကြီးမားသော အကြံရှိလေသည်။ လူငယ်တစ်ဦး ၏ လက်ထဲတွင် အသက်ငင်နေသော ဓာတ်မီး တစ်လက်ရှိပြီး နောက်လူငယ်တစ်ဦးမှာ စာအုပ်တစ်အုပ် ခါးကြားတွင်ညပ်ပြီး ၈ ပေ ခန့်ရှည်သော လှေကား ကို မကာ မှောင်မဲ တိတ်ဆိတ်နေသော အိမ်ခန်းအတွင်းသို့ နောက်ဖေး ပေါက် မှ တိုးဝင်သွားလေသည်။
အခန်းထဲတွင် ဖျော့တော့သော ဓာတ်မီးရောင် ဖြင့် ဟိုဟိုဒီဒီ ထိုးကြည့်ပြီးနောက် မီးလုံးလေး တစ်ပွင့်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည်. သည်မှာတွင်ပင် လူမနေသော အိမ်လေးမှာ မီးလုံးလေး အလင်းရောင်ဖြင့် တဖြည်းဖြည်းမြင်စ ပြုလာလေသည် ထို အိမ်ထဲတွင် လူငယ်လေးများ အလိုရှိသော ထူးဆန်း၍ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသော ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သော ခဲရောင် မှော်ကြိုးလေး တစ်ချောင်းရှိသည်။ လူငယ်လေး၂ ဦးမှာ ဤကြိုးလေးအတွက် ယခု ကဲ့သို့ စွန့်စားရောက်ရှိလာ ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုမှော်ကြိုးလေးသည် အခန်းငယ်လေး တစ်ခု အတွင်းတွင် အထက်မျက်နှာကျက်ဆီ မှ တွဲလောင်းကြနေသည်ကို မြင်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် လှေခါး ပါလာသော လူငယ်သည် မျက်နှာကျက်လူဝင်ပေါက် အောက်တဲ့တဲ့တွင် လှေခါးကို ထောင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဓါတ်မီး ကိုင် လူငယ်သည် လှေကားမှတဆင့် မျက်နှာကျက်လူဝင်ပေါက်မှာ ၀င်သွားကာ မှော်ကြိုးလေးကို အပြင်သို့ တဖြည်းဖြည်း ဆွဲထုတ်လာလေသည်။ အပြင်သို့ ကြိုးလေး ရောက်လာသောအခါ ကြိုးလေသည် ပေ ၂၀ နီးပါး မြင့်သော ဓါတ်တိုင်၏ အပေါ်တွင် ခွ၍ တင်ထားသောကြောင့် လှေကားနှင့် လူငယ်သည် လှေကားကို ဖြန့်ခင်းကာ ပုဆိုးကတောင်း ကျိုက်၍ တက်ပြီး ဖြုတ်ပါတော့သည်။
ထိုသို့ဖြုတ်ရုံနှင့် မပြီးသေးပါ။ အကြောင်းမူကာ အဆိုပါ ခဲရောင်မှော်ကြိုးလေးသည် တဘက် အဆောက်အဦ ၏ ခေါင်မိုးပေါ်သို့ သွယ်တန်းနေပြီး မျက်နှာကျက်ကြားထဲသို့ ၀င်ပြေးသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုကြောင့် အဆိုပါကြိုးကို လိုက်ဖမ်းနိုင်ရန် လူငယ် ၂ ဦးသည် ဘီး ၁၀ ဘီးတက် ယာဉ်ကြီးတစ်စီး ဖြင့် လိုက်လံ ဖမ်းဆီးပါသည်.. ဖမ်း၍ မိသမျှကို ခွေခေါက်ကာ သိမ်းဆည်းပြီး မျက်နှာ ကျက်ကြားထဲတွင် ညပ်ထားလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက်ထို အဆောက်အဦ မျက်နှာကျက် ကြားထဲသို့ ခက်ခဲ စွာဝင်ရောက်၍ ထို မှော်ကြိုးလေးအား ဖမ်းဆီးတုတ်နှောင်သော ကြိုးဂွင်းလျှောသေးသေးလေးများနှင့် ဖမ်းဆီးတုတ်နှောင်ပြီး အသာအယာ ခေါ်ဆောင်လာပါသည်။ လူငယ် ၂ ဦး နေထိုင်ရာ အိမ်သို့ ကြိုးလေး မရောက်မှီ လွန်စွာကြီးမားသော သစ်ပင်ကြီး တစ်ပင် တားဆီးကာကွယ်နေသောကြောင့် လှေကားကိုင် လူငယ်သည် ပုဆိုးကို တဖန် ကတောင်းမြှောက်အောင်ကျိုက်ပြီး သစ်ပင်ဂွ ကြားတက်ကာ အတားအဆီး အကာအကွယ်များကို ဖယ်ရှားကာ အဆိုပါကြိုးလေး အား အိမ်ခန်းထိ ရောက်အောင် သယ်ဆောင်ယူလာတော့သည်။
ထို့နောက် ထိုကြိုးလေး အား မှော်ဓာတ်များ ကိန်းအောင်နေသော ဖန်ပြားတစ်ခုပါသော သေတ္တာပါးပါးလေးနှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပြီး လူငယ်လေး ၂ ဦးသည် ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ အလိုရှိသော နေရာဒေသများသို့ မိမိတို့ အခန်းတွင်းမှ ပင် ကြိုးလေး အကူအညီဖြင့်သွားရောက် လည်ပတ်တော့သည်….။။။ ဩော် အံ့ဖွယ်သရဲ ထူးဆန်းလှပါလား လောကဓာတ်ပညာတို့ရယ် ဟူ လူငယ်တစ်ဦး၏ စိတ်မှ တိုးတိုးလေး ရွတ်ဆိုမိလိုက်ပါတော့ သည်…..
၁ နာရီ ၄၇မိနစ်….
ရေးသားသူ phoe thu taw at 1:53 AM
တစ်ရက်သော ခရမ်းရောင် ညလေးကို အမှတ်တရ ရေးဖွဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်….
ရေးသားသူ phoe thu taw at 4:49 PM
နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးလို့ နောက်နှစ်တစ်နှစ် ရောက်လာပြန်ပြီ။ ဘာမှတော့ မထူးဆန်းပါ။ ရပ်တန့်မနေ့တဲ့ အရာတွေထဲမှာ အချိန်ကာလ ဆိုတာလည်း ပါရှိတဲ့အတွက် သူ့ဟာသူ သွားမြဲ သွားနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကုန်ဆုံးခဲ့ တဲ့တစ်နှစ်အတွင်း ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိသည်။ ကောင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့သလို မကောင်းတာတွေလဲ လုပ်ခဲ့သည်။ မှန်တာတွေ ရှိသလို မှားတာတွေလဲ ရှိခဲ့သည်။ ဘာပဲပြောပြော ၂၀၀၈ က ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ တစ်သက်လုံးမှာ နောက်ထက် ၂၀၀၈ ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မရှိတော့ပါဘူး။ ပြီးသွားခဲ့ပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကတော့ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါ။ ကဲ.. ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ၂၀၀၈ မှာ….. ဘလော့ဂ်၊ ဆိုရှယ် လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့…
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ..
ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့မှ အစပြု၍ ပြည်တွင်းတွင် ရှိသော ဘလော့ဂ်ရေးသူ တော်တော်များများနှင့် မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ..
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၏ သား ကျောင်းတက်ခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ တိုက်ခန်းတစ်ခန်း မှာ နေပေးဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများစွာ၏ စုရပ်နေရာ တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လ
တူတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်မှ မိတ်ဆွေများ နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်သွားကြသည်။
မတ်လ၏ ညနေခင်းတွေမှာ မိတ်ဆွေများနှင့် နေ့တိုင်းနီးပါးတွေ့ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလ
ဘလော့ဂ်ရေးသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလာသည်။
သင်္ကြန်ကို ၂ ရက် ဘလော့ဂ်ရေးသော သူငယ်ချင်းများစွာနှင့် မဏ္ဍာပ်ထိုင်ရေ ကစားဖြစ်ခဲ့သည်။
အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလာသော မိတ်ဆွေနှင့် တူတူ နေဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ..
မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းဒေသများအား မုန်တိုင်း အကြီးအကျယ်အတိုက်ခံရသည်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ရသော ဒေသများအား သွားရောက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ထိရောက်သော လူမှုရေး ကယ်ဆယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဧရိယာ တွင်းသို့ ၃ခေါက်မျှသာ သွားရောက်ခဲ့သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသများအား ကြိမ်ဖန်များစွာ သွားရောက်ပြီး အရေးပေါ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လ..
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသများအား ထောက်ပံ့မှုများဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ..
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသများအား ထောက်ပံ့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်နေသော တိုက်ခန်းတွင် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများစွာနှင့် တူတူနေဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသူငယ်ချင်းများနှင့်ပင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသများအား ကူညီမှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အထောက်အပံ့များမှာ နိုင်ငံတကာမှ မိတ်ဆွေများ၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ..
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသများ၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော မျိုးစပါး လိုအပ်မှုအား နိုင်ငံတကာ မိတ်ဆွေများ၏ အကူအညီဖြင့် သွားရောက် ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့သည်။ ဘလော့ဂ်ရေးသော သူငယ်ချင်းများစွာနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ် World Blog day seminar တစ်ခု ဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းများစွာနှင့် ထိုပွဲလေး မဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါ။
၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာာလ..
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့် တူတူ နေခဲ့သော တိုက်ခန်းလေးမှ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ပြည်ပပြန် နာမည်ကြီး ဘလော့ဂ်ဂါ မမ တစ်ယောက်နှင့် တွေ့ဆုံ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ စက်တင်ဘာလ အတွက် ကဗျာ တစ်ပုဒ် ရေးခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ..
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ နှင့် အရင်လို အတူတူ မနေဖြစ်တော့ပေမဲ့ တွေ့ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ညနေတွေ ရွှေရောင် တောက်ဖြစ်နေသည်။ အားလပ်နေသော အလုပ်မှ ပြန်လည် အသက်ဝင်ပြီး အလုပ်တွေများနေသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ..
တစ်လလုံးလိုလို အလုပ်တွေများနေသည်။ မိတ်ဆွေများနှင့်လည်း ရံဖန်ရံခါ သာ တွေ့နိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ..
များခဲ့သော အလုပ်များ လက်စ သပ်သော အချိန်ရောက်လာခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ The web show 2008 (My web My style) ပွဲ လေး အားကူညီပေးခဲ့သည်။
နှစ်သစ်ကူးသွားသော အချိန်ကို သတိမထားမိလိုက်သလို Happy new year ဆိုသည့် အော်ဟစ်သံများကို မကြားလိုက်သော နှစ်ဖြစ်သည်။
ဖိုးသူတော် ( ၁.၁.၂၀၀၉)
ရေးသားသူ phoe thu taw at 10:15 PM